Talaabada 1: Waraysiga Baarista hore (Barnaamijka Maraykanka ee Qorista Qaxootiga) - CORENav
Talaabada Koobaad: Waraysiga baarista hore
Kadib marka laguu ogolaaday in labaaro inaad uqalanto dib udajin lagaa siiyo Maraykanka, waxaa laguugu yeerayaa inaad marto waraysi horudhac ah oo lagaaga qaadaayo Xarun Taageerta Dib udajint, ama RSC da kuugu dhaw. Dawlada maraykanka waxay maalgalisaa ururo aan dawli ahayn si ay uga hawlgalaan RSC yada.
Shaqaalaha Kiiska ee RSC ayaa fiirinaaya dukumiintigaaga aqoonsiga kuuna abuuraaya fayl kiis (iyo qoyskaaga, hadaad isla codsanaysaan). Wuxuu kuwaydiinayaa suaalo quseeya sida iyo sababta aad ugasoo qaxday wadankaagii hooyo, wuxuuna aruurinayaa macluumaadkaaga shaqsiga ah ee loogu baahanyahay baaritaanada amaanka ee hore. Wuxuu sidoo kale kuwaydiinayaa inaad bixiso macluumaadka shaqsiga ah ee inbadan oo kamida eladaada xataa hadaysan kula socon. Shaqaale kasocda RSC ayaa kaaqaadaaya sawir inta booqasha ay kugula joogaan.
Kadib waraysigaaga horudhaca ah, macluumaadkaaga waxaa loo dirayaa wakaaladaha kale ee dawlada Maraykanka si ay uhubiyaan amaanka. Wakaaladahaan waxay baarayaan macluumaadka aad bixisay si loo hubiyo inay yihiin kuwo run ah oo sax ah. Mararka qaar, baaritaanka dhanka amaanka ah wuxuu qaadan karaa bilo badan waana, mararka qaar, mayeesho Dawlada Maraykanka.
Shaqaalaha Kiiska RSC ayaa masuul ka ah inuu soo aruuriyo macluumaadka laxariira codsigaaga aad kudalbanayso in Dib udajin lagaa siiyo Maraykanka qaxooti ahaan. Inta lagu jiro waraysigaaga horudhaca ah, shaqaalaha kiiska wuxuu qorayaa sheekadaada qusaysa sababta aad ugasoo carartay wadankaagii hooyo iyo sababta aad udareemayso inaadan hada kunoqon karin.
Hadii shaqaalaha kiiska uusan kuhadlin luuqadaada, RSC ayaa kuukeenaysa turjumaan. Turjumaanada RSC waa kuwo aad utabaran oo xirfad leh. Shaqada turjumaanku waa inuu adiga iyo shaqaalaha kiiska idinka caawiyo inaad wada hadashaan. Turjumaanku waxna kuma daraayo waxna kama jaraayo sheekadaada. Way sheegayaan waxkasta oo adiga iyo shaqaalaha kiisku aad dhahdaan mana badalayaan macnaha erayadaada. Hadaad walaac kaqabto turjumaanka, fadlan arintaan soosheeg. Xili walba inta uusocdo waraysiga waxaad waydiisan kartaa shaqaalaha kiiska inuu ama kacodsan kartaa inuu kuceliyo ama si kale udhigo suaal hadaadan fahmin ama wax ay mugdi kujiraan. Waxaad sidoo kale lahadli kartaa shaqaalaha RSC hadaadan kuqanacsanayn ama aad dareento inaadan fahmayn turjumaankaaga.
Waajib waxaa kugu ah inaad runta sheegto. Waa inaad markasta qumanaataa aadna runta kasheegtaa macluumaad kasta. Hamala awaalin jawaabaha. Hadaadan garanayn jawaabta suaal, waa inaad sheegtaa inaadan aqoon. Jawaabahaaga waa inay noqdaan kuwo gaar ah, sax ah, oo dhamaystiran inta macquulka ah. Shaqaalha kiiska ayaa qoraaya sheegashadaada qaxootinimo, gaar ahaana sababaha wadankaaga kaasoo cayriyay kaana hortaagan inaad kunoqoto. Macluumaadkaan waligiis waa lahaynayaa waxaana loo gudbinayaa lAdeegyada Muwaadinnimada iyo Soogalootiga ee Maraykanka, USCIS.
Qarsoodiga Dhamaan waxyaabaha aad usheegtay shaqaalaha kiiska waa qarsoodi waxaana loo isticmaalayaa in laguugu raadiyo Dib udajin aad kahesho Maraykanka. Turjumaanada ayaa masuuliyad iska saaraaya inay ilaaliyaan macluumaadka aad sheegtay intii waraysigu socday. Shaqaalaha kiiska RSC iyo turjumaanado waxba kama qaban karaan natiijada waraysigaaga. Kaliya USCIS ayaa go’aamin karta hadii aad uqalanto dib udajin.
Maxaan keenayaa goobta waraysiga baarista hore?
Usoo qaado warysiga horudhaca ah wax alaala wixii dukumiinti aqoonsi ah oo aad haysato adiga iyo qoyskaaga kiiska kujiraba. Kaqaxooti ahaan, kuwa badan oo kamid ah dukumiintiyaada ayaa kaadhumi kara ama labaabi’in karaa, taasna waa fahmaynaa. Shaqaalahaaga kiiska ayaa kuusheegaaya hadii dukumiintiyo kale loo baahdo. Waa inaad keentaa dukumiintiyada rasmiga ah ee aad haysato, hadaadan haysan orjinaalka, keen koobiyada.
Hoos waxaa kuqoran dukumiintiyada muhiimka u ah markaad marayso waraysigaaga horudhaca ah. Hadaad haysato, waa inaad soo qaadataa orjinaalkooda ama koobiyadooda aadna latimaadaa goobta waraysiga:
Shahaadooyinka UNHCR ee qaxootiga / Kaarka aqoonsiga ee UNHCR / dukumiintiyada diiwaangalinta ee UNHCR
Baasaboorka ama dukumiintiyada safarka (ayna kujiraan dukumiintiyada safarka ee dhacay)
Kaarka aqoonsiga wadankaaga
Kararka aqoonsiga kumeelgaarka ah ee ajaanibta
Shahaadooyinka dhimashada, haday qayb katahay dacwada
dukumiintiyada diinta (gardaadinta, guurka, shahaadada guurka ee kumeel gaarka ah, dhimashada)
Dukumiintiyada shaqada, haday qusayso codsigaaga qaxootiga
Dukumiintiyada muhiimka ah ee caafimaadka (baaritaanada iyo daawooyinka laguu qoray)
Foomka caafimaadka oo leh waqtiga aad dhalayso hadaad uur leedahay
Waraaqaha yeerista booliiska/milatariga
Dukumiintiyada maxkamada ee wixii danbiyo lagugu xukumay ah, meelkasta oo aduunka ah
Qoraalada caafmaad ee kiiskaaga laxariira (nuqulada wargaysyada, email lada kuquseeya)
Bugta militariga iyo dukumiintiga kale sida kaararka aqoonsiga, shahaadooyinka, kacayrinta ciidanka, ama fasaxa ah inaad hub qaadan karto
Shahaadada laan qayrta cas (hadii laguu xiray adoo maxbuus dagaal ah)
Waraaqaha soojedinta, haday quseeyaan kiiskaaga Magacyada, ciwaanka iyo taleefan nambarada dadka Maraykanka kuujooga (asxaabtaada iyo eheladaada horay ugu noolaa Maraykanka)
Maxaan kafilan karaa waraysiga baarista hore?
Markaad soogasho RSC ama goobta waraysiga, waxaad maraysaa baaritaan amaanka ah (birta wax qabata) waxaana lagaa rabaa inaad katagto dhamaan wixii elektaroonig ah, ayna kujiraan taleefannada, goobta amaanka inta aad ukujirto xarunta RSC.
Waxaad mudo dheeri sugi karrtaa RSC ama waraysiga kahor intaadan galin waraysiga. Shaqaalaha RSC ayaa ayaa kuqancinaaya mudadaadan ilaa iyo inta macquulka, laakiin samirkaaga waan kaaga mahad celinaynaa. Hadaad wax suaalo ah qabto ama walaacyo intaad sugayso, fadlan usheeg shaqaalaha RSC ama saraakiisha amaanka ee meesha sugitaanka jooga.
Caruurta waxaa macquul ah inaan marwalba lagasoo tagin. Fadlan usoo qaad cunto fudud caruurtaada, xaafaayado usoo qaad, (hadii loobaahdo), iyo boonbalayaasha ama waxyaabaha kale ee ay isku mashquuliyaan.
Maalinta uu dhacaayo waraysigaaga horudhaca ah, shaqaale kasocda RSC ayaa sawir kaaqaadaaya, jooga iyo misaanka. Shaqaale kasocda USCIS ayaa faro kaqaadaaya codsade kasta oo jira 14 sano iyo wixii kawayn. Tan waxay dhici kartaa maalinta waraysigaaga horudhaca ah ama maalinta waraysigaaga USCIS.
Waxaa lagaasoo wadayaa meesha sugitaanka waxaana lagu gaynayaa goobta waraysiga waxaana kusoo wadaaya turjumaan ama xubin kamida shaqaalaha RSC. Ogoow turjumaanada waxaa lagu amray inaysan kaala hadlin wax quseeya kiiskaaga. Fadlan kuhagaaji dhamaan suaalahaaga shaqaalaha kiiskaaga. Dhamaan shaqaalaha kiiska ee RSC waxay xirtaan astaanta RSC si aad si fudud ugu aqoonsato.
Maxaan kafilan karaa intuu socdo waraysigayga baaritaaanka ka horeeeya?
Waxaa kuwaraysanaaya midkamida shaqaalaha kiiska ee RSC oo tabaar iyo xirfad uleh hawshaan. Shaqaalaha kiiskaee RSC waxaa looga baahanyahay inuu kuwaydiiyo suaalo badan. Jawaabahaaga waxaa loo gudbinayaa USCIS si ay uqiimeeyaan inaad uqalanto dib udajin lagaa siiyo Maraykanka. Waan ognahay in suaalahaan qaarkood ay aad u adagtahay inaad kajawaabto. Waxaan kaaga mahad celinaynaa samirkaaga nidaamkan.
Maxaan kafilan karaa kadib waraysiga baarista hore?
Marka laad dhamaysato waraysigaaga uuna kufasaxo shaqalaha kiiskaaga, waa kabixi kartaa RSC ama goobta waraysiga.
Fadlan filo mudo bilo badan ah oo udhaxayn doona waraysigaaga horudhaca ah ee u kaaqaaday shaqaalaha kiiskaaga ee RSC iyo waraysiga ay kaaqaadi doonto USCIS. Codsigaaga lama ilaawaayo lamana tuuraayo.
Marka lagaaro xiliga waraysigaaga USCIS, RSC ayaa kuusoo sheegaysa. Waqti xaadirkaan, waa muhiim inaad lasocto RSC wixii quseeya isbadalo kasta oo kudhaca kiiskaaga sida dhalashada cunug, dhimashada xubin kamid ah qoyska, guurka xubin kamid ah qoyska, ama wixii isbadalo ah oo kuyimaada goobta ama macluumaadka lagaala soo xariiraayo.